Mid Ka Mid Ah Musharaxiinta Maraykanka Oo Ku Dhawaaqay Hadal Muslimiinta Ka Cadhaysiiyay |
Mid Ka Mid Ah Musharaxiinta Maraykanka Oo Ku Dhawaaqay Hadal Muslimiinta Ka Cadhaysiiyay
Hargeysa(GNN)Musharax ka tirsan xisbiga Jamhuuriga Maraykanka oo doonaya in uu u tartama xilka madaxtinimada dalka Maraykanka ayaa ku dooday in Diinta Islaamka iyo dastuurka Maraykanka aanay isqaadan karin.
Ben Carson, oo ah dhakhtar hawlgab ah oo ku takhasusay xanuunada neerfaha ayaa sheegay in aanu waligii aqbali doonin in qof muslim ah uu madaxweyne ka nqodo dalka Maraykanka “Caqiidada qofka dalkan madaxweynaha ka noqonaya ayaa qiimo weyn ugu fadhiyo codbixiyeyaasha dalkan,” ayuu ydihi Carson.
Ninkan ayaa ku dooday inaanu waligii taabacsanayn in Maraykanka hogaankiisa loo doorto Muslim “Anigu ma doonayo in hogaanka qaranka laga dhigo qof muslim ah. Gabi ahaan ba anigu sidaasi ma taabacsani,” ayuu yidhi Carson oo telefishanka NBC barnaamijkiisa “Meet the Press” la hadlay Axaddii.
Hadaladiisan ayaa yimid maalmo kadib markii ninka ugu cadcad tartanka musharaxnimada xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump, uu diiday in uu iska fogeeya mid kamid ah taageerayaashiisa oo ku eedeeyay madaxweyne Obama in uu muslim yahay oo xitaa ‘’ aanu Ameerikaan dhalad ah ahayn’’.
Madaxweynaha Machadka darsa arimaha carabta Maraykanka ayaa BBC-da u sheegay in arigtida Mr. Carson ay tahay mid nacsinimo ah. Afhayeenka machadka Ibrahim Hooper ayaa cambaareeyay hadalka ka soo yeedhay musharax Ben Carson.